Princie sy Mendrika : Nametraka taratasy hafahafa, dia tsy hita
Nanomboka ny alatsinainy hariva teo no tsy hita i Princie 12 taona sy i Mendrika 14 taona, mpiara-mianatra.
Nandefa antso ombay mitady tao anatin’ny tambajotran-tserasera ny renin’i Princie, nangataka fanampiana ny mba hanaparitaka sy hampilaza azy ireo raha misy mahita azy roa vavy ireto. Raha tsiahivina ny tantaran’ireto ankizivavy ireto dia niala tao an-tranony eny Ambatomaro, rehefa avy nisakafo antoandro tao izy roa vavy ireto, ka tsy niverina intsony, raha iny handeha hianatra hariva eny Ankadindramamy iny. Nambaran’ny fianakavian’i Princie fa tonga nitady ny rainy tao an-tranony izy roa vavy ny maraina. Tsy tao anefa ilay rangahy tamin’izay. Avy nisakafo atoandro teny Ambatomaro izy roa vavy ireto no nametraka taratasy milaza hoe : “aza malahelo ianareo fa tsy maintsy mandeha izahay…” Iny handeha hianatra hariva iny, tokony tamin’ny 12h45, no tsy niverina nody intsony. Tsy nisy olana tsy nisy adiady hoy hatrany ny fianakaviana fa dia tsy hita fotsiny izy roa vavy. Efa teny amin’ny pôlisy sy zandary ny ray aman-drenin’ny roa tonta. Omaly, araka ny vaovao voaray farany dia hita teny Ampitatafika izy roa vavy ireto. Avy hatrany dia nandefa fampilazana tao amin’ny tambajotra ny renin’i Princie nilaza ny fahitana azy ary nofafana ilay antso ombay mitady teo aloha. Tsy fantatra kosa raha nipetraka taiza na niafina taiza ireo ankizivavy nandritra ny alin’ny alatsinainy teny Ampitatafika teny.